Tag: ka hel raadadka khadka tooska ah | Martech Zone
Tag: ka hel raadadka khadka tooska ah
Talaado, Disembar 15, 2020 Talaado, Disembar 15, 2020 Stefan Dhagaxyada
LinkedIn waxay isbeddel ku sameysay sida ganacsiyada ay isugu xirmaan. Ka faa'iideyso barnaamijkan adoo adeegsanaya qalabkiisa Navigator Sales. Ganacsiyada maanta, iyadoon loo eegin sida ay u weyn yihiin ama u yar yihiin, waxay ku tiirsan yihiin LinkedIn shaqaaleynta dadka adduunka oo dhan. In ka badan 720 milyan oo isticmaaleyaal ah, barxadani maalin kasta wey sii kordheysaa cabir ahaan iyo qiime ahaanba. Qoritaanka ka sokow, LinkedIn hadda waa mudnaanta koowaad ee suuqleyda doonaya inay sare u qaadaan cayaartooda suuq geynta dijitaalka ah. Ka bilaabaya
78% dadka wax iibiya ee adeegsada baraha bulshada waxay ka iibiyaan facooda kale. LeadSift waxay soo bandhigtay barmaamijkeeda daruuriga ah oo baaraya malaayiin wada sheekeysi ah kanaallada warbaahinta bulshada si loo helo oo loo gaarsiiyo hagitaannada suurtagalka ah ee ganacsiyada iyadoo sidoo kale la siinayo hoggaamiye kasta halbeeg lagu qiyaaso ujeedka. Waxay fududeyneysaa fikradda iibinta bulshada waxayna adiga iyo kooxdaada ka dhigeysaa mid wax ku ool ah oo wax ku ool ah habka iibka iyada oo si aan kala sooc lahayn loola dhexgeliyo CRM. LeadSift waxay ka dhigeysaa wax fudud adoo keenaya khuseeya